Posted on October 11, 2017 October 19, 2017 Amandla High LED-Flood Khanyisa Abakhiqizi
Stadium Lights & Ezemidlalo Lighting | Amandla High LED-Flood Khanyisa Abakhiqizi
LED Stadium Lights kuyinto accessory ebalulekile Football Stadium, kodwa ababaningi abantu banake Lights Stadium. Uke ngisho wazibuza ukuthi ukuze zikhanyise njalo Stadium enkulu? LED Stadium Lights yakhelwe ukuze kuhlaliswe nezimfuneko ukukhanyisa ezihlukahlukene Izitediyami elitholakala TACHYON Lights. LED Stadium ukukhanya kwethu lungasetshenziswa for ukukhanyisa ongaphandle, ezifana Ezemidlalo Field ukukhanyisa, sezindiza, ehholo, lapha kwakhiwa khona ngamabhlogo, yokupaka, ukusetshenziswa abahamba ngezinyawo. Khetha kusuka ezihlukahlukene LED izibani uzamcolo nkundla kusukela 60 ukuze 10,000 Watts, 9600 ukuze 1,600,000 lumens. Sinazo zonke ezingeni league LED Ibhola Lighting & Stadium Ukukhanyisa kusuka esikoleni esiphakeme futhi inyuvesi ibhola zasendlini enkundleni yebhola lezinyawo futhi professional enkundleni yomdlalo webhola kuhlanganise NFL. Lamanje NFL ukukhanyisa standard ukuphi 250 ft ikhandlela ukukhanya kusayithi kungenziwa kalula kwafezwa ukukhanyisa LED. College ibhola kancane ongaphakeme, 150 izinyawo ikhandlela kuyadingeka, high school football kudinga kuphela 50 izinyawo ikhandlela.
Umbani we-Outdoor Football Stadium
Zethu LED Ezemidlalo Flood Lighting konga kuze kufinyelele 80% energy ukusetshenziswa kuqhathaniswa bendabuko inkundla ukukhanyisa futhi sonke isikhathi sokusebenza phezu 80,000 amahora, ngakho isidingo esikhundleni ama ukuthi akuzona esikhulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukuncipha ukushisa ngenxa LED inkundla ukukhanyisa enkundleni zasendlini kuzonciphisa umthwalo ohlelweni air conditioning bese ugcine amandla aminingi. inkundla yethu LED ukukhanyisa umkhiqizo line kuhlanganisa LED inkundla izibani, LED izibani inkundla esikhundleni, ezemidlalo LED ensimini ukukhanyisa ukulungiswa, futhi oguqula bendabuko inkundla ukukhanyisa ukuze kusebentisa emandla agezi ngalokuyimphumelelo ongaphandle enkundleni ukukhanyisa. TACHYON Khanyisa inikeza Design Khanyisa Consortium (DLC) evunyiwe LED inkundla zokukhanyisa izaphulelo zesifunda nokazwelonke nemihlomulo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe yethu LED yezemidlalo kukhanyisa oda okulandelayo LED ensimini ukukhanyisa, sicela uphonsa us umyalezo info@tachyonlight.com. Sinikeza khulula commercial ukukhanyisa audit ezifana nezindleko okufanela ukuhlaziya nenzuzo yokutjala, sizokutshela mayelana engcono ongaphandle enkundleni ukukhanya ukuthengisa ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
Ibhola inkundla ukukhanyisa kuyazuzisa ukutshala LED ukukhanyisa izixazululo kufaka zasendlini enkundleni yomdlalo webhola noma ngaphandle. Zobuchwepheshe LED ukukhanyisa ubuchwepheshe uthethe metal halide isibani. Lokhu ngoba izibani LED is neshaya ithembekile, okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi eyonga ugesi. Le nkundla futhi inzuzo emkhakheni wezemidlalo kuzo zonke izinhlobo ezemidlalo ngenxa enkundleni izibani LED kanye kokufaneleka okukulethayo ensimini yayo. izinga ukukhanya Ephakeme eyatholakala kusukela LED port ukukhanya zalapho zethu kuyokwenza ngcono fan isipiliyoni nokuphepha ngcono. Ngaphezu isipiliyoni kangcono ukuthi wanikela ngokusebenzisa ezemidlalo yethu LED, zinikeza okukhulu energy imali, esaphila isikhathi eside, izinzuzo eziningi elinde ukuvula.
Isicelo Stadium Lights
ezemidlalo LED luminaire Sitshelwa cishe okungenamkhawulo kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza ezemidlalo ungacabanga. Ziyakwazi ephelele njengoba izibani enkundleni yezemidlalo, izibani enkantolo ezemidlalo, kweNkundla kanye naseduze ngaphandle Arenas. Njengoba isibonelo esikhethekile, ake sixoxe ngendlela LED port Floodlight yethu singasetshenziswa inkundla yebhola lezinyawo, insimu webhola, inkantolo basketball, ensimini baseball, Inkudla yebhola lomphebezo, igalofu, nightlife, ebaleni lokudlala, ngisho hockey isixhumanisi Ingabe. Kunjalo, lena nje isicelo sakhuluma. Kunezinto eziningi ngaphezulu….
Kodwa kungani ukuxazulula nge inani lemali elincane ukukhanya lapho ungakwazi ukunikeza abalandeli bakho okungcono ezemidlalo isipiliyoni ne ukukhanyisa kakhulu olunikezwa TACHYON LED izibani? Esikhathini ongaphandle football nkundla, LED ezingasetshenziswa ukumelana izimo zezulu ezihlukahlukene ezifana umoya onamandla, imvula, lokushisa okokuqandisa kuyadingeka. LED Stadium Lights futhi kudingeka ukusebenzisa olude kusukela isibani langempela kuya kobuso bokhalo. LED football ukukhanyisa lunembile, okungaguquki kahle. Gwema ukungcola ukukhanya ihlathululo okuncane ukuthi LED Stadium izibani ongasinika enkundleni yomdlalo webhola yakho. ukukhanyisa LED ihlinzeka ukukhanya ezingeni uhambisane yonke le nkundla football enikeza ukubonakala okucacile amabhola, imigqa abadlali lokushisa emini umbala.
Ukuphepha lokudlala ne LED ukukhanya
abasubathi’ ukuphepha kuyinto ukukhathazeka okukhulu. Qiniseka ukuthi ukukhanya emkhakheni lezinyawo ngokwanele elikhanyayo ukuze singathwesi ubuhlungu, futhi ningathuli izithunzi noma ukukhanya ukuze lokudlala. Kungakhathaliseki league yakho football endlini noma ngaphandle, football ukukhanyisa ilungele izibani ephezulu Induku izibani uzamcolo ukuqinisekisa ikhwalithi ukukhanya kudingeka ukuphepha umdlali futhi kumnandi.
Uma kuziwa football enkundleni enkundleni LED ukukhanya, TACHYON LED angazamukela zonke izidingo zakho ukukhanyisa. Ingabe ucabangela nokuthuthukela ukukhanyisa yakho? Ukukhumbula izidingo zakho kanye nemiphumela elindelekile, sinikeza imininingwane ecacile futhi iseluleko sendlela ukuhlola ezikhona kanye nokwandisa ukukhanyisa izinhlelo. Lokhu kuhlanganisa Redesign okuphelele ukuze elula LED ushintsho izixazululo. Ezemidlalo izakhiwo ungazange ushintshe enkundleni izibani LED uzolahlekelwa imali enkulu. Ngenxa izinzuzo eziningana kakhulu okusindisa, low power ukusetshenziswa, ukushaqeka ukumelana, impilo ende, yesondlo ongaphakeme, kakhulu ukukhanya ezingeni nesisindo ukukhanya, LED Stadium Lights ilungele zonke izikhungo zezemidlalo.
Ngicela unginike ithuba kukhanye indawo yakho. Ngokusebenzisa TACHYON Khanyisa, umdlalo kwezemidlalo iyoba isenzakalo okuthakazelisayo ngempela. A non-siyakhazimula ukukhanyisa ikhamera ithumba isenzo futhi abonisa ngokucacile izilaleli imisebenzi emkhakheni. ukukhanyisa Architectural ngizodonsela abalandeli futhi zikhanyise indawo. Intelligent zokulawula ukunciphisa izindleko futhi sithuthukise ukusebenza. Sizokubonisa indlela yokwandisa unenkululeko le nkundla, ukwandisa isibalo izenzakalo, eqela ngaphezulu, futhi uqaphele a ezemidlalo esisetshenziselwa eliyingqayizivele futhi ezintsha nokuzijabulisa indawo. Uma une nophenyo okwengeziwe ku Lights Stadium, Sicela uzizwe ukhululekile uxhumane nathi ngokusebenzisa ifomu elingezansi, noma info@tachyonlight.com
Umkhiqizo Uphenyo ku Stadium Lights
LED Stadium Ukukhanyisa Abakhiqizi | Football…
Ezemidlalo Lights, Stadium Lights